Unisex9in 1 Push Up Rack ဘုတ်ကိုအိမ်တွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လေ့ကျင့်ခန်း - Buy အခမဲ့ & အခွန် | WoopShop®
Unisex9in 1 Push Up Rack Board ဘက်စုံလေ့ကျင့်ခန်းများကိုအိမ်တွင်ပြုလုပ်ပါ
$40.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $67.99
အရောင် အိတ်နှင့်ခေါက်လို့ရတယ် foldable ခေါက်သိမ်း
မှစ. သင်္ဘောများ တရုတ်နိုင်ငံ ရုရှားပြည်ထောင်စု စပိန်
အိတ် / တရုတ်နှင့်အတူခေါက်နိုင်သော ခေါက်သိမ်း / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း ခေါက်သိမ်းနိုင်သော / တရုတ် အိတ်နှင့်ရုရှားဖယ်ဒရေးရှင်းနှင့်အတူခေါက်နိုင်သော မဖွင့် / တရုတ် မဖွင့်နိုင်သော / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း ခေါက်သိမ်း / စပိန် အိတ် / စပိန်နှင့်အတူခေါက်နိုင်သော မဖွင့် / စပိန်
Unisex9in 1 Push Up Rack Board တွင်ပြည့်စုံသောအိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်း - အိတ် / တရုတ်နှင့်အတူခေါက်နိုင်သော backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
သင်ကြားမှု Mode: စာအုပ်
ပုံစံ: ငါ -shush Push-up ထိန်သိမ်း
မော်ဒယ်နံပါတ်: ဘုတ်အဖွဲ့ Up ကို Push
ဤ Push Up ထိန်သိမ်းဘုတ်အဖွဲ့သည်အရောင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပြည့်စုံသော push-up လေ့ကျင့်ရေးစနစ်ဖြစ်သည်။
ကွဲပြားသောအရောင်များသည်မတူညီသောလေ့ကျင့်ခန်းကြွက်သားများ (အပြာရောင်ရင်ဘတ်၊ အနီရောင်ပခုံး၊ အဝါရောင် - အစိမ်းရောင်နှင့်အစိမ်းအစိမ်းရောင် triceps) တို့ကိုပစ်မှတ်ထားသည်။
အထုပ်တစ်ခုထဲမှာကြယ် ၄ လုံးထည့်ထားတယ်။ ကြွင်းသောအရာသည်ထိုက်တန်၏။ တောင်မှညွှန်ကြားချက်, အင်္ဂလိပ်၌တည်ရှိ၏။ လက်ကိုင်များသည် Prof. Stops များကဲ့သို့ပျော့ပျောင်းသော်လည်းမထိရ။ ငါပြီးသားသုံးပါနဲ့ငါကြိုက်တယ်! အကြံပြုပါသည်။ ကျနော့်အမြင်တွင်, စျေးနှုန်းအရည်အသွေးအကောင်းဆုံး - ဖြစ်ပါတယ်။ မော်စကိုတွင် (၂၁ ရက်) ၀ င်ရောက်လာသည်။